खेती किसानीबाटै १६ लाख आम्दानी – Clickmandu
खेती किसानीबाटै १६ लाख आम्दानी
क्लिकमान्डु २०७६ असोज २४ गते १८:२० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो समय धेरैले राजनीतिलाई खेतीपाती बनाएका छन् । धेरैले राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाइरहेको अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ कचिला निवासी खुसीराम चौधरीले भने राजनीतिलाई उद्यमशीलतासँगै जोडेर अगाडि बढिरहेका छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिलाई आधार बनाएर नेकपा तुलसीपुर उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष चौधरीले दाङको तुलसीपुर–१२ कचिलामा करीब एक बिगाहा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिहेका छन् । उनले गोलभेंडा, आलु, प्याजलगायत अन्य तरकारी खेती गरिहेका छन् । सिँचाइको पनि राम्रो व्यवस्था रहेकाले कचिला क्षेत्रमा राम्रो तरकारी उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदै उनी चार वर्षदेखि तरकारी खेतीमा व्यस्त छन् ।
खुसीरामले वार्षिक करीब रु १५÷१६ लाख तरकारी खेतीबाट आम्दानी गर्दै आएका छन् । उनले अहिले एक याममा तीन÷चार लाख आम्दानी गर्ने उनी गरेको बताए । अहिले आलु ६, टमाटर पाँच र प्याज, खुर्सानीलगायत अन्य तरकारी तीन कट्ठामा खेती गरेका छन् । आफू पनि उद्यमशील बन्न नसकेसम्म समृद्धिका भाषणले मात्र सार्थकता नपाउने उनको भनाइ छ ।
‘हामी धेरै समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर भाषण गर्छौं,’ उनले भने ‘तर भाषणले मात्रै समृद्ध बनाउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि आफैं पनि उद्यममा जोडिनु पर्छ ।’
उनले राजनीति गर्नेले खाली बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिकर्मीले पनि आमनागरिक जस्तै गरी जीवनयापन गर्नुपर्ने बताए ।
परिवार चलाउन तरकारी खेती गर्नुभएका उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन राजनीतिलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको बताए ।
‘राजनीति गर्नेले खाली बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ‘जीविकापोर्जनका लागि आफ्नो काम गरेर पनि देश विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।” मिजासिलो, इमान्दार र सरल स्वभावका खुसीरामले आफ्नो खेतीपातीसँगै मुलुकको राजनीति र समाजका हरेक सरोकारको विषयमा जानकारी राख्ने गर्नुहुन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा दख्खल राख्ने खुसीराम राजनीतिमा पनि त्यतिकै सफल छन् । उनी पार्टी सहभागी हुने विभिन्न चुनावमा राजनीतिक चेतना बाँड्दै हिँड्नु हुन्छ । अन्य समयमा खेतीपातीसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको योजना अगाडि बढाउन लाग्ने गरेका छन् ।
शिक्षक बन्ने रहरः बाध्यताले राजनीति
विद्यार्थीकालमा निकै मिहेनती खुसीरामको शिक्षक बन्ने निकै धोको भए पनि उहाँलाई समय र परिस्थितिले राजनीतिमा ल्यायो ।
‘म निकै मिहेनत गर्थे, मैले ९ र १० मा अत्तिरिक्त गणित विषय लिएर पढेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो धोको सक्षम शिक्षक बन्ने पनि थियो,’ उनले दश जोड दुई पढ्दै गर्दा परिस्थितिले अर्कैै घुम्ती लियो र अहिले सक्षम राजनीतिकर्मीमा ल्याई पु¥यायो । उनले अहिले राजनीतिक शास्त्रमा डिप्लोमा गरेका छन् ।
विसं २०५६ मा तत्कालीन माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मूल एकाइ कमिटी सदस्यबाट विद्यार्थीको राजनीति शुरु गरेका खुसीराम २०७१ देखि ७४ सम्म अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेर काम गरे । विद्यार्थी राजनीतिमै बढी समय बिताउनु भएका खुसीराम युद्धको समयमा पश्चिम मगरात थारूवान्, भेरी कर्णाली, सेती महाकालीलगायतको नेतृत्व गरे ।
मुलुकको परिवर्तनका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुभएका खुसीरामको अहिलेको यात्रा भनेको समृद्धिको मार्ग नै भएको उनले बताए ।
‘पहिले मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने लडाइँमा होमियौँ र अहिले अधिकार सम्पन्न नेपालको संविधान निर्माण ग¥यौँ”, उनले भने ‘अब मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउने लडाइँ जारी राख्नेछौँ ।’
कृषिलाई पनि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण नगर्दासम्म आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
‘हामी समृद्धिका नारा त लगाउँछौँ,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई समृद्ध बनाउन कृषिलाई पनि व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।’ कृषिलाई माया गर्ने उनी पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमीनमा धमाधम घर बन्दै गएकामा चिन्तित छन् ।
स्थानीयस्तरमा विकासको ढोका खोल्न र व्यापक रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकास गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्रबाट राम्रो सम्भावना भएको उनले बताए । उनले व्यावसायिक रुपमा कृषि पेशा अँगालेका कृषकलाई राज्यले उचित साथ, सहयोग तथा सम्मान दिनुपर्ने समेत बताए । कृषियोग्य जमीनको संरक्षण र व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ । रासस
बैंकमा कोरोनाः स्थायी कर्मचारीलाई भीआरएस र बढुवा रोक्का, करारका कर्मचारीको जागिर चैट !
अब व्यक्तिलाई होइन, कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइन्छः कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल
४० वर्षमा बिग्रिएकाे कृषिक्षेत्र ३ वर्षमा सुधार्छुः कृषि मन्त्री भुषाल
५ % भन्दा कम ब्याजमा ऋण दिइन्छ, किसानको तथ्यांक अद्यावधिक गरी अनुदान खातामै जान्छः कृषिमन्त्री भुसाल
स्वस्थानीको प्रसाद जस्तै मन्त्री, सचिवले पैसा बाँडेर कृषि फस्टाउँदैनः मन्त्री भुसाल
कृषि मन्त्रालयको ४ अर्ब गायब ! कहाँ लगे अर्थमन्त्रीले ?